Ny Huawei Mate 30 dia havoaka amin'ny volana novambra any Eropa | Androidsis
Iray volana mahery lasa izay Natolotra ny Huawei Mate 30 sy Mate 30 Pro tamin'ny hetsika iray tany Munich. Ny avo lenta vaovao an'ny marika sinoa dia aseho ho sehatra matanjaka sy mahaliana be an'ireo mpampiasa manerantany. Satria izy ireo dia telefaona izay misy asan'ny fahalianana lehibe sy mahasoa. Na dia ny tsy fisian'ny fampiharana sy serivisy Google aza dia mametra ny fahafahanao hahita fahombiazana.
Izany no antony tsy mbola nandefasana io elanelana io any Eropa. Iray volana izay no antenaina hahalala hoe rahoviana no ho tonga eto amin'ny kaontinanta eropeana ireo Huawei Mate 30 ireo. Toa farany misy bebe kokoa data momba ity fananganana ofisialy ny telefaona ity.
Toa efa vonona ihany ny marika amin'ny famoahana ireo telefaona ireo. Araka ny nambara, ny Huawei Mate 30 dia ho tonga amin'ny tapaky ny Novambra mankany amin'ny tsena any Eropa. Tamin'ny voalohany, izy ireo dia havoaka amina tsena marobe, izay ahitana an'i Espana ihany koa.
Ity karazana telefaona finday ity dia mpivarotra any China. Na dia any Eropa aza dia misy fisalasalana ny amin'ny mety hahombiazany, satria tsy hanana rindranasa sy serivisy Google izy ireo. Ho fanampin'izany, mbola mistery ihany raha ho an'ireo telefaona ireo dia ho azo atao ny mametraka ireo fampiharana ireo.
Ny vidin'ireo finday ireo dia naseho tamin'ny fampisehoana tao Munich. Ny Huawei Mate 30 dia mitentina 799 euro amin'ny fandefasana azy any Eropa. Ny Mate 30 Pro dia hanana vidiny 1.099 euro, raha ny kinova 5G an'ity maodely Pro ity dia halefa amin'ny vidiny 1.199 euro. Azo inoana fa hisy ny vidiny amin'ity tranga ity.
Tsy maintsy miandry fanamafisana vitsivitsy avy amin'ny marika sinoa isika. Nefa toa izany ny famoahana ny Huawei Mate 30 dia efa akaiky ho avy. Izy io dia karazana kalitao, izay manan-javatra betsaka hatolotra ny mpampiasa. Na dia tsy misy ny fampiharana Google aza dia voafetra ny fetran'ny fahombiazanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Mate 30 dia ho tonga any Eropa amin'ny volana ambony